Seva zero yekudyara mhinduro - Goldenor Electronic Technology Co, Ltd.
Imba > Nhau > Indasitiri Nhau > Server zero yekudyara mhinduro
Server zero yekudyara mhinduro
Nhanganyaya: Kuziva kuchengetedza data hakureve kuti inoda mari yekudyara. Kana kukosha kwedata kusiri kwepamusoro, sisitimu iri nyore, uye hapana chikonzero chekushandisa uye kuchengetedza kwenguva refu, zvinokwanisika kushandisa zviwanikwa zviripo kuvaka dhata rekuchengetedza dhata pasina chero capital capital.
Zero yekudyara mhinduro
Kuziva kuchengetedza data hakureve kuti inoda mari yekudyara. Kana kukosha kwedata kusiri kwepamusoro, sisitimu iri nyore, uye hapana chikonzero chekushandisa uye kuchengetedza kwenguva refu, zvinokwanisika kushandisa zviwanikwa zviripo kuvaka dhata rekuchengetedza dhata pasina chero capital capital.
Semuenzaniso, chengetedza rako pachako data mune yakapusa hofisi nharaunda. Mune desktop desktop masisitimu akadai seWindows neLinux, mazhinji acho anobatanidza mamwe akareruka ekuchengetedza data data. Aya mabasa ekuchengetedza anokwana kuti aone otomatiki uye akajairwa backup emamwe mafaira. Kune zvakare akawanda madiki backup software ine akanaka mabasa ayo anogona kutorwa pasi kubva paInternet. Kunyangwe software idzi dzisingakwanise kutsigira dhatabhesi-ehunyanzvi, iwo anokwana kwese kwese desktop desktop office
Kana iri yekuchengetedza data rekuchengetedza, unogona kusarudza nzvimbo yemahara yedhisiki yemuno kana iyo nzvimbo yeineti server. Kazhinji kutaura, zvakachengeteka kusarudza nzvimbo yedandemutande server, nekuti kana iyo disk yemuno ikakundikana, iyo diski rese inogona kunge isingawanikwe, saka data rekuchengetedza rakachengetwa padhisiki remuno richarasikirwa nezvarinoreva.
Pfupiso: Mira-yega backup; diki dhata; Hapana chenguva refu chekuchengetedza chinodiwa, kungodzivirira kurasikirwa kwedata; hapana hunyanzvi hwekushandisa dhatabhesi; iyo system inogona kuvharwa chero nguva; Chinyorwa date kupora.
10,000 kusvika ku20,000 yuan inivhesitimendi mhinduro
Kune mamwe masisitimu anoda kuchengetera dhata kwenguva yakareba, hazvisi mari kungo chengeta iyo backup data padandemutande server. Tepi yekutyaira uye mamwe matepi anofanirwa kutengwa kwekuchengetedza-kwenguva refu kwe data rekuchengetedza. svikiro. Kazhinji, mutengo we tepi dhiraivha ingangoita zviuru gumi kusvika zviuru makumi maviri zveyuan. Mushure mekutenga tepi yekutyaira, hapana mari yekutenga backup software, hazvina basa. Dambudziko rinogona kugadziriswa nekungoshandisa backup basa rinouya nehurongwa. Muchokwadi, yakawanda system data inoda kuchengetwa kwenguva yakareba, asi hapana chakakwira otomatiki chinodiwa, uye zvinorambidzwa pane zvakarongwa nguva yekuzorora hazvina kuomarara. Mune ino kesi, kana pasina hombe dhatabhesi yekushandisa, dhata yekuchengetedza data inogona kugadziriswa.
Semuenzaniso, mawebhusaiti-epamoyo, madiki masystem ekurapa, madiki mafaera masystem, nezvimwewo Achienzaniswa neeseya desktop desktop, masystem aya ane huwandu hukuru hwedata uye anoda inguva-refu yekuchengetedza dhata. Asi iyo fomati yedata iri chaizvo faira fomati, hapana chakaomesesa dhatabhesi dhizaini, uye zvinotenderwa zvachose kumisa dhata backup. Nekuda kwakadai, iyo backup software yakabatanidzwa muiyo inoshanda sisitimu pamwe neye tepi dhiraivhu inogona kunyatso ziva zuva nezuva otomatiki backup yeiyo system.
Pfupiso: Mira-yega backup; general data vhoriyamu; Kuchengetedza kwenguva refu kwedata kunodiwa; hapana nyanzvi yekushandisa dhatabhesi; shutdown yakarongwa yakabvumidzwa; Chinyorwa date kupora.
30,000 kusvika ku50,000 yuan yakadyarwa mumhinduro
Kana iyo sisitimu ichida kutsigira dhata kuburikidza nemambure, iyo yakasanganiswa yekuchengetedza basa reiyo inoshanda sisitimu haigone kuzadzikisa chinodikanwa. Panguva ino, pamusoro pekutenga tepi dhiraivha, iwe unodawo kutenga zvimwe nyanzvi backup software kuti uwane network backup. Kazhinji, mutengo wezve backup software zvigadzirwa papuratifomu yeWindows haina kukwirira, uye software yekudyara kwe20,000 kusvika ku30,000 yuan inofanirwa kuzadzisa zvinangwa zvekugadzira. Kuwedzera mutengo weiyo tepi dhiraivhu ye10,000 kusvika ku20,000 yuan, mutengo wese unogona kudzorwa pakati pe30,000 ne50,000 yuan.
Sisitimu yakadaro inogona kutotsigira mamwe mafomu e database uye inogona kuona otomatiki kudzoreredza data. Kune epakati saizi hofisi masisitimu, madiki ehunyanzvi mawebhusaiti, uye madiki-madiki macampus network, ino sisitimu yakazadzisa zvizere chinangwa chekuchengetedza dhata. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mhinduro iyi ndeye chete iyo inomiririra system yeWindows, Linux uye mamwe mapuratifomu. Kana iyo inomiririra chikuva iri Unix minicomputer, mari yakadaro haizokwanisi kuzadzikisa zvinoshanda zvinoshanda.
Pfupiso: Nyore network backup; Windows operating system platform; avhareji data vhoriyamu; Kuchengetedza kwenguva refu kwedata kunodiwa; mamwe manyorerwo ekushandisa. shutdown yakarongwa yakabvumidzwa; otomatiki data kupora.
100,000 yuan inivhesitimendi mhinduro
Kana kukosha kweiyo data data kukwirira, iyo mari mu data backup ichawedzera zvinoenderana. Kunyanya kana iyo sisitimu ichidikanwa kuti iwanikwe maawa manomwex24 uye pasina nguva hwindo rekuti basa rekuchengetedza rimise backup, iyo backup system inofanirwa kuve nekwanisi yekuchengetedza mafaira akavhurika, iyo inonzi online backup technology. Izvi zvinoda kuti backup software ive nesimba rakaringana. Panguva imwecheteyo, pamwe nekuwedzera kwesystem automation zvinodiwa, manyore manejimendi etepi midhiya zvinonetsa kuzadzisa zvido zveiyo system Kana huwandu hwe data husiri hwakanyanya kukura, unogona kufunga nezve kutenga autoloader (AutoLoader) yequasi-automated tepi manejimendi.
Pasi pemitemo yakadaro, kudiwa kwemari yakachengetwa mune zvose software uye hardware yakawedzera. Kazhinji, kudyara kweinternet backup software pane Windows chikuva kunofanirwa kunge kuri zviuru makumi matanhatu kusvika makumi masere zveyuan, uye mutengo weiye autoloader iri zvakare ingangoita zviuru makumi matatu zveyuan, saka hurongwa hwese hwekudyara huri pamusoro pe100,000 yuan.
Iyo backup system yakagadzwa neiyi investment inogona kutsigira yakaenzana yakakura-nhanho Windows network nharaunda, uko mafaera, dhatabhesi kunyorera, mail masystem, ruzivo rwevashandisi uye imwe data inogona kuve yepakati uye yakabatana kuchengetedza kuchengetedza. Maitiro ekuchengetedza ari otomatiki zvakakwana, pasina echinyorwa kupindira. Zvakare, kana node iri muchirongwa ikakundikana, kudzoreredza dhata kunoitwa otomatiki uye kungwara. Chero bedzi senge backup yepakati uye bootable system yekutanga dhisiki inopihwa, iyo backup software inogona kudzorera iyo nyika pamberi pehurongwa kutadza.
Nzvimbo yekushandisa yeiyi backup system iri zvakare yakakura kwazvo. Iyo kambasi network yezvikoro zvepuraimari nesekondari, dhipatimendi rekuchengetedza bhizinesi, hofisi network system yemasangano ehurumende, yepakati-saizi bhizinesi network sisitimu, uye e-commerce webhusaiti webhusaiti yakamirira iri padanho iri rekudikanwa. Kubva pane chimwe chirevo, iyi nhanho yekushandisa system ndiyo yakanyanya kuwanda. Iyi mhando yenzira yekuchengetedza dhata inogona kuiswa mune yakanyanya kuomarara network nharaunda inoumbwa neWindows platform. Kubva pane chimwe chikamu, vashandisi padanho iri ndivo zvakare simba guru rinoita kudiwa kwemusika wekuchengetedza.
Pfupiso: Medium-saizi network backup; Windows operating system platform; hombe data vhoriyamu; Kuchengetedza kwenguva refu kwedata; chaiwo dhatabhesi kunyorera; mail system uye imwe data yehunyanzvi; backup isiri-yekumira backup; akangwara date kupora.
Vanopfuura mazana matatu emakumi matatu emari yekudyara
Kana iro vhoriyamu yedata rasvika padanho re terabyte, imwe tepi yekutyaira uye autoloader haichakwanise kusangana nezvinodiwa zve otomatiki manejimendi, uye tepi raibhurari chishandiso ine yakakwira degree of otomatiki inodiwa. Kazhinji, iyo yekushandisa system chikuva mune ino nharaunda ichave yakavakirwa paUnix, kana imwe yakaoma kunzwisisa yakavhenganiswa sisitimu yeakawanda anoshanda system mapuratifomu. Munharaunda ino, kuomarara kwekuchengetedzwa kwedata kwakawedzera kuwedzera Mune yakajairwa yakasanganiswa chikuva nharaunda, iyo data backup system yekudyara iri inopfuura yuan mazana matatu.
Kana mazana matatu ezviuru yuan achishandiswa pakuverenga, iyo software chikamu inosvika 30-40% yemari, iyo inoshandiswa kutenga yakakwira-kumagumo backup software uye vatengi vamiririri vanotsigira mapuratifomu eUnix, pamwe nemamwe maratidziro edhisheni uye tepi zvirongwa zvekutsigira raibhurari, nezvimwewo chikamu. Imwe 60 ~ 70% yemari inoshandiswa kutenga tepi michina yemaraibhurari uye imwe nhamba yematepi. Kana iwe uchida kushandisa LAN Mahara data backup pasi peiyo SAN dhizaini, iwe unofanirwa kuwedzera nezve zviuru zana zveyuan mu capital capital kuti uvake iyo fiber fiber inoshandura chikamu cheSAN.
Mhinduro iyi haigone chete kunyatsoziva iyo yakazara otomatiki dhata yekuchengetedza basa reiyo yakasanganiswa system chikuva, tsigira dzakasiyana siyana hombe-dhata dhatabhesi kunyorera, uye uone 7x24-awa isingamise online dhata backup, asi zvakare ziva LAN Mahara data backup pasina kutora network zviwanikwa . . Panguva imwecheteyo, mune mhinduro yakadaro, basa rekupusa kupora kwedata harisisina kukosha. Nekuda kwekuoma kwehurongwa hwehurongwa uye kuomarara kwehukama hwe data, hupenzi huchenjeri kupora njodzi pasina kupindira kwemaoko kunowanzo kukonzera kusawirirana muhurongwa hwehurongwa. Yakarasika chirevo chekudzoserwa kwedata. Mune ino nhanho yemamiriro ekushandisa, iyo sisitimu inoda kuwedzera kuchinjika kutonga pamusoro penzira yekudzosa dhata uye zvemukati. Iyo sisitimu inofanirwa kukwanisa kupa inosarudzika kudzosera kwedata uye mamiriro kudzoreredza panguva yakatarwa.
Iyi nhanho ye data backup system inowanzo shandiswa mumatanho makuru ekuchengetera mashoma. Semuenzaniso, hukuru hukuru bhizinesi repakati dhata system, matunhu uye matunhu emakanzuru-ehurongwa-ruzivo ruzivo, sainzi yekutsvagisa ruzivo ruzivo, ruzivo rwekuwanazve ruzivo, nezvimwe. Aya masisitimu anonyatso bvisa kutadza kwesystem, zvakanyanya zvakanyanya zvinodiwa kuenderera. , kugadzikana uye kuwanikwa kwemabhizimusi masisitimu, uye zvachose havatenderi nguva yekuronga uye isina kurongwa chero nguva Kazhinji, pane zvirango zvakaomarara uye zvakajeka pabasa rehurongwa zviwanikwa nemabasa ekuchengetedza. Kazhinji, backup data hova hadzibvumidzwe kutora huwandu hwakawanda hwenzvimbo bandwidth zviwanikwa. Muchidimbu, padanho rekushandisa, iyo backup system yakaonekwa senge yakazvimirira system, uye iro basa rekuchengetedza ratova chikamu chakakosha cheyakajairika mashandiro ehurongwa hwese. Iyo inonzi yepamusoro-kumagumo backup musika inoreva kudiwa kwemusika mune ino ndima.
Pfupiso: Yakakura-pamwero network backup; Unix kana akawanda mashandiro epuratifomu mapuratifomu; huwandu hwe data kusvika padanho reTB; -kureba data rekuchengetedza; hombe-dhatabhesi kunyorera; imwe data yehunyanzvi senge mail masisitimu; zadzisa isina-mira backup. kuchinja data kudzoreredza; hapana network bandwidth Zviwanikwa.
Investment anopfuura mamirioni yuan
Ye data centre-chikamu chekuchengetedza masisitimu, kuvakwa kwedata backup system kwakawedzerawo zvakanyanya. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nezvikonzero zviviri: iyo hombe huwandu hwedata uye kuwedzera kwekuchengetedza zvinodiwa. Muchokwadi, mune iyo data centre-chikamu Ultra-hombe yekuchengetedza system, izvo zvinoshanda zvinodiwa zve backup system hazvipfuure izvo zveiyo yapfuura nhanho. Nekudaro, iro dhata vhoriyamu yemakumi kana kunyangwe mazana ematabhetiiti akawedzera zvakapetwa mutengo wehardware yematepi raibhurari michina. Uye zvakare, kana idzi data dzikarasika kana kukuvara, mhedzisiro yacho ichave yakakomba, saka mazhinji masisitimu avo ekuchengetedza epamhepo anoshandisa zvakare kuremara kwenjodzi uye dzimwe nzira, izvo zvinowedzera kuwedzera software nehurdhiyo yegadziriro yekuchengetedza iyo inoshanda pamwe nayo . Kazhinji, dhata yekuchengetedza data iyo inoshanda pamwe neiri kure yekudzosa sisitimu system ine mari yekudyara isiri pasi pe1 miriyoni yuan.
Mune urwu rudzi rwehukuru-hukuru system, iyo software yekudyara reshiyo ye backup system inowanzo kuve 20 ~ 30%, uye iyo Hardware yekudyara maakaunzi mazhinji, 70 ~ 80%. Iko hakuna chaiko shanduko mune izvo zvekutenga zvemukati. Iyo software chikamu chinonyanya kuita backup server, backup mutengi, dhatabhesi interface module, tepi raibhurari yekutsigira module, nezvimwe. Kune yekudzoreredza masystem, pane dzimwe nguva yakakosha online chengetedzo yedhizaini module. Yeye Hardware midziyo chikamu, iri chaizvo tepi raibhurari uye yayo yakabatana michina Ehezve, mune yakakura-inzvimbo nharaunda, kutenga tepi iri zvakare mari hombe isingagone kufuratirwa.
Chii chinonakidza ndechekuti nekudyara kwakakura kudaro, iyo data backup system yakavakirwa ine mikana mishoma kwazvo yekutarisana nekutadza kwehurongwa. Nekuti iyi data yepakati-chikamu chekuchengetedza sisitimu yasvika pakakwirira pakudikanwa kwekuwanika kwedata, mazhinji epamhepo masisitimu ekuchengetedza anoshandisa zvigadzirwa zvakagadzikana pari zvino uye anoshanda pamwe nehunyanzvi hwemberi kuona kuti data harirasike. Saka zvinoreva here kuti yakadaro backup system haina zvainoreva? Chokwadika kwete! Muchokwadi, mune yakadaro hombe data data, kumwe kukosha kweiyo backup system kwakabuda, ndiko kuti, iyo yekuchengetedza mafaira. Isu tinoziva kuti kunyangwe zvikafambira mberi sei tekinoroji yepamhepo yekuchengetedza system, inogona chete kuvimbisa kuti iyo yazvino data haizorasike kana kukuvara, uye haigone kubatsira iyo system kunyora nhoroondo dhata munguva yakapfuura, uye basa re backup system ari pano. Iyo data uye chinzvimbo chinoda kuchengetwa kuti chiongororwe chakabatana zvakachengetwa zvakakwana mugadziriro yekuchengetedza.
Semuenzaniso, mamiriro ekunze ekuchengetedza data yeNational Meteorological Center, iyo data yekubhadharisa yeiyo telecommunication yekubhadharira nzvimbo, iyo dhipoziti dhizaini yedhizaini yebhangi data centre, zvichingodaro. Aya masystem ekuchengetera ane masimba ane simba epamhepo ekuchengetedza, uye dziviriro yavo yedata yakasimba zvekuti kunyangwe pakaitika njodzi yakaita semoto nekudengenyeka kwenyika, inogona kuona kuti data harizorasike. Nekudaro, aya masisitimu akagadza hombe yekudyara backup system, iro rakakosha basa rayo nderekuchengetedza rakakosha nhoroondo ruzivo uye chinzvimbo chekubatana kwedata kuongororwa uye kucherwa kwedata.
Ehezve, mu data centre-chikamu chekuchengetedza masystem, tsaona dzinoitika zvakanyanya pano neapo. Zvichida munhu wese achiri kurangarira kutadza netsaona kwenetiweki system pa Capital Airport nguva pfupi yadarika. Izvi zvinoratidza kuti zvisinei kuti matanho ekudzivirira tsaona akasimba zvakadii, panenge pasina nguva ichavapo apo zvakavanzika zana zvarasika. Panguva ino, basa regadziriro yeparutivi raipenya, uye zvaive zvakakwana kuvhara iyo hombe kudyara. Muchokwadi, kana pasina backup system, tsaona paCapital Airport inokonzeresa zvinopfuura mashoma maminetsi ekunonoka.
Pfupiso: Dhata repakati-chikamu netiweki backup; Unix kana akawanda mashandiro epuratifomu mapuratifomu; dhata vhoriyamu inosvika makumi gumi eTB; Kuchengetedza kwenguva refu kwedata; hombe dhatabhesi kunyorera; mail masisitimu uye imwe data yehunyanzvi; zadzisa isina-mira backup. kuchinja data kudzoreredza; hapana Occupy network bandwidth zviwanikwa; kushandira pamwe nehurongwa hwekudzora njodzi; ziva data rekuchengetedza basa.
Tevere:Chirevo chekutsvagisa chinoti China yepamhepo server indasitiri cheni iri kusimbiswa zvishoma nezvishoma